Imikroseli ye-DPA yokutyumba abagqithisi eSerbia naseCroatia | Iindaba ze-NAB | I-2020 I-NAB bonisa i-Media Partner kunye noMvelisi we-NAB BONISA LIVE. Iindaba zeeNjineli zoSasazo
Ikhaya » iindaba » I-DPA Microphones ichonga abahambisi eSerbia naseCroatia
Njengenxalenye yokuzinikela kwakhe kwisiseko sabathengi abanobungcali, i-DPA Microphones yonyule ababini abatsha eSerbia naseCroatia.
I-AVL Projekt kunye ne-LAV Projekt ngoku zinoxanduva kwinkampani yonke yeemowudi zemigangatho ephezulu, equka iimveliso ezijolise kwimakethi yokurekhodisha kunye nevidiyo yomsindo, isandi esiphilayo, ufakelo nosasazo.
Zombini i-AVL kunye ne-LAV ngabathengisi bexesha elide kunye nabahlanganisi bezisombululo zomsindo, ukukhanya kunye nevidiyo. Bathetha ngendawo yentengiso ze-DPA ngothungelwano lwenkqubo yokudibanisa, abafakeli kunye nabathengisi, abasebenza kakhulu kwindawo yemidlalo yeqonga, osasazo kunye neenkampani zokhenketho ezihlala khona. Ukwazi ukusebenza njengabahlanganisi benkqubo ngokunjalo, banokuxhasa abathengi ukusuka kwinqanaba lokuqala lokunxibelelana ukuhanjiswa kunye nokufakwa kwezisombululo ze-turnkey. Ngokujolisa kakhulu emva kokuthengisa, bobabini i-AVL kunye ne-LAV baye bakha udumo njengamaqabane athembekileyo kuloo mmandla.
U-Slobodan Veckalov, uMlawuli oLawulayo we-AVL Projekt, uthi: "Sinochulumanco kakhulu ukuba simele uphawu lwentengiso enkulu. Sike sasebenza ne-DPA ngaphambili kwiiprojekthi ezahlukeneyo, kwaye sicebisa ngemveliso ekumgangatho ophezulu ophezulu kwipotifoliyo yeemveliso esazisasazayo.
UDavor Vujic, uMlawuli oLawulayo we-LAV Projekt, uthi: "Kulilungelo elingathethekiyo kwaye ibophelelekile ukwazisa iimveliso ze-DPA ezinkulu kwimarike yaseCroatia."
UGuillaume Cadiou, Umphathi weNtengiso ye-DPA Microphones, uthi: “I-DPA ibikhula kakuhle kule ngingqi iminyaka eliqela, kwaye ngoku sithatha inyathelo elilandelayo ngokusondela kwimakethi yethu ngokuqesha abameli bengingqi kule ngingqi. Ndilazile iqela kwi-AVL okwethutyana, kwaye akufuneki ndicinge kakhulu xa sifuna abameli. Sele babonakalisile ubungcali bokumamela kwaye basebenza kakhulu ukusukela ngala mhla wokuqala. ”
I-DPA ikholelwa ekubeni oku kuqeshwa kuya kuqinisekisa ukuqhubeka kwenkxaso kubaseki bayo abaxabisekileyo kuwo onke amacandelo emarike. Ngolwazi oluthe kratya malunga ne-AVL Projekt, nceda undwendwele www.avlprojekt.rs/en
I-Microphone ze-DPA yiyona ndlela ehamba phambili yeDenmark Professional Professional umvelisi wezisombululo eziphezulu ze-microphone izixazululo zezicelo zobungcali. Injongo yokugqibela ye-DPA kukuba kuhlale ibonelela abathengi bayo ngeendlela ezifanelekileyo kakhulu zeemakrofoni kuzo zonke iimarike zayo, ezibandakanya izandi eziphilayo, ukufakela, ukurekhoda, i-theatre kunye nokusasazwa. Xa kuziwa kwinkqubo yoyilo, i-DPA ayithathi iifutshane. Akukho nkampani iyancipha kwinkqubo yayo yokuvelisa, eyenziwa kwicandelo le-DPA eDenmark. Ngenxa yoko, iimveliso ze-DPA zidunyiswa emhlabeni jikelele ngenxa yokucaca kwazo ngokucacileyo kunye nokungafihli, ukucaciswa okungafaniyo, ukuthembeka okuphezulu kwaye, ngaphezu kwayo yonke, isandi esicocekileyo, esingenakuqhathaniswa nesingathandabuzekiyo.
Ngolunye ulwazi, nceda u tyelele www.dpamicrophones.com
AV Projekt Injineli yokusasaza Ukusasazwa kwezobunjineli Khroweyishiya Distributors Microphone zeDPA UGraham Chapman uVikelelwa kuMhleli I-LAV Projekt serbia Imikhonto kunye neentolo Injini yeVidiyo 2019-09-11
Previous: Amahlakani e-V-Nova kunye ne-Simplender entsha ye-Pan-Afrika yokuSasazwa kweNkonzo yeMVMO
next: Dalet Media Cortex iyakhawulezisa iShift kwi-AI-powered Media Workflows